ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ – Federal Journal
ကမ္ဘာပေါ်မှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဖက်ဒ ရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ဆီ ဦးတည်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။ တစ်ချိန်တုန်းက ဖက်ဒရယ်မူကို လက်ခံလိုက်ရင် နိုင်ငံ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ပြိုကွဲတော့မယ်လို့ တစ်ပါတီအာဏာရှင်အစိုးရက ဝါဒဖြန့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ပါပဲ။ ဖက်ဒရယ်ပြည် ထောင်စုတွေကို ကမ္ဘာမှာ လေ့လာကြည့်ရင် အာဂျင်တီးနား၊ သြစတြေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ ဘယ်ဂျီယမ်၊ ဘရာဇီးလ်၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ မလေးရှား၊ မက္ကဆီကို၊ နီပေါ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ ပါကစ္စတန်၊ ရုရှား၊ UAE၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အမေရိကန်. . . . စသဖြင့်တွေ့ရပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်လို့ပဲခေါ်ခေါ် “ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုတွေ၊ ပြည်နယ်တွေကို ဖက်ဒ ရယ်အစိုးရအောက်မှာ ထားရှိအုပ်ချုပ်ခြင်း”ပါပဲ။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်တွေကြားမှာ အာဏာခွဲ ဝေထားပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးကြတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ မတူကြပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံအများစုက တော့ “တစ်ပြည်ထောင်စနစ် နိုင်ငံတော်” လို့ခေါ်တဲ့ Unitary Statesတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုပိုများသလို ဗဟိုအစိုးရကပဲ ဥပဒေပြုရေးအာဏာရှိတဲ့သဘောပါ။ တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း (ဗြိတိန်)၊ ဂျပန်၊ စပိန်၊ ပြင်သစ် . . . စတဲ့ နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတစ်စုကို သူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ စုပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံမတူပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရတဲ့ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပါတယ်။ လူမျိုးကို အခြေခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပထဝီအနေအထားကို အခြေခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးနောက် ခံကို အခြေခံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ လူမျိုးကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် တွေ သတ်မှတ်ရင် သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အနေအထားပါ။ ဒါပေမယ့် မတူညီကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုရှိနေတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ ဖြစ်တည် မှုကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆီဦးတည်ချင်ရင် လူမျိုးရေးပဋိပက္ခပုံစံ ပုံဖော်နေမှုတွေကိုပါ လျှော့ချရမှာပါ။ လက်ရှိအနေအထားမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ (၂၀၁၅) ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ အနိုင်ရရှိဖူးတဲ့ သာဓကရှိပါတယ်။ ရှမ်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါ တိုင်းရင်းသားပါတီကသူတွေ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင့်မရဘဲ ဗဟိုအစိုးရကရွေးချယ်သူတွေပဲ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ကိုသာကျင့်သုံးရင် တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအများစု အနိုင်ရရှိတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ (၁၉၄၇)ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲကနေ လူမျိုးစုလွှတ် တော်အမတ်တွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါ့အပြင်(၁၉၄၇) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးကို အခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်တွေကို သတ်မှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ဂျာမနီဥပမာ
ဂျာမနီနိုင်ငံဟာ ပြည်နယ် (၁၆)ပြည်နယ်ပါဝင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ ပထဝီအနေအထားပေါ် မူတည်ပြီး “ဘာလင်”နဲ့ “ဟန်းဘာ့ခ်ျ”ကို CITY STATE(မြို့ပြပြည်နယ်)လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ Federal Republic of Germany ကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်း တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အနောက်ဘာလင် ဟာ ဂျာမနီရဲ့ တရားဝင်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်မှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီး Baden အပါအဝင် နယ်မြေ (၃) ခုဟာ Baden- Wur Hemberg ပြည်နယ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်မှာ ဆားလိစိ အစောင့် အရှောက်ခံဒေသဟာ ပြည်ထောင်စုနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဆားလိစိပြည်နယ်အဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ အနောက်ဂျာမနီနဲ့ အရှေ့ဂျာမနီဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံအဖြစ် တရားဝင်ပေါင်းစည်းခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီ ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်ထောင်စုလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့ အရှေ့ဂျာမနီဟာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့ ပြည်နယ်တွေက Branden burg, Saxany, Saxany-Anhalt နဲ့ Thuringia တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘာလင်နဲ့ အရှေ့ဘာလင်ဟာလည်း “ဘာလင်”အဖြစ် စုစည်းပြီး တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရတဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ် လာခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေမယ့် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည် နယ်တွေမှာလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသင့်သလောက် ရှိပါတယ်။ Bundesrat လို့ခေါ်တဲ့ အထက်လွှတ်တော်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရတွေက ရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ အပေါ်မူတည်ပြီး အထက်လွှတ်တော်မှာ ပါဝင်ခွင့်ရရှိတာပါ။
Basic Law လို့ လူသိများတဲ့ (၁၉၄၉)ခုအိမ်မှာ ပြဌါန်းခဲ့တဲ့ ဥပဒေဟာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့အသက်ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီ Basic Law ကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင် သုံးပုံနှစ်ပုံရဲ့ ထောက်ခံမှု လိုအပ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ လူ့ဂုဏ် သိက္ခာကို အာမခံပြီး ဖက်ဒရယ်ကို အခြေခံတဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရတွေဟာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပဲ အဓိကဦးစားပေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပထ၀ီအနေအထားအရ အခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပဲဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ စက်မှုအင် အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်နေဆဲပါ။ ထူးခြားချက်က အခြေခံ ဥပဒေမှာ အထက်လွှတ်တော်ကို ဖျက်သိမ်းခွင့်မရှိပါဘူး။
သြစတြီးယားဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ထင်ရှာသလို ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လက်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ် (၉) ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ဂျာမန်ဘာသာနဲ့ Lander လို့ခေါ်ပါတယ်။ ( ပည်နယ်တွေကိုခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပါ) ။ ဖက်ဒယ်ပြည်နယ်တွေကိုတော့ ဂျာမန်ဘာသာနဲ့ Bundeslander လို့ခေါ်ပါတယ်။
ပြည်နယ် (၉) ခုက Bundeslander, Carinthing, Lawer Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Upper Austria, Vienna တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်နယ်တစ်ခုစီတိုင်းဟာ Landtag လို့ခေါ်တဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွေ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရပါတယ်။ ပြည်နယ်တွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ငါးနှစ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပါတယ်။
အားနည်းချက်ကတော့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှာ ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာပိုရှိတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်မှာ ပါတီ ရှစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ပြီး အထက်လွှတ်တော်ကို ဖက်ဒရယ်ကောင်ဒီလို့ခေါ်ပြီး အောက်လွှတ်တော်ကို အမျိုါ်သားကောင်စီလို့ခေါ်ပါတယ်။ ပါလီမန်ဟာ မြို့တော်ဗီယင်နာမှာ တည်ရှိပြီး (၁၉၂၀) က အတည်ပြုခဲ့တဲ့ ဖက်ဒရယ်အခြေခံဥပဒေကို ကျင့်သုံးတာပါ။ အစိုးရအကြီးအကဲဟာ ဖက်ဒရယ်သမ္မတဖြစ်ပြီး Popular Vote နဲ့ ရွေးချယ်ပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်ဟာ ကိုယ်ပိုင်ပြဌါန်းခွင့်နဲ့ တန်းတူအခွင့်အရေးကို အာမခံတဲ့စနစ်သာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်က ပိုအကျိုးများမလဲဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပဲ ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါကြောင်း။ ။သွေး (စစ်ကိုင်း)
Ref: Basic Law for the Federal Republic of Germany by Christian Tomuschat, David P. Currie
Austrian Historical Memory and National Identity.
ကမ်ဘာပျေါမှာဖကျဒရယျစနဈကို လကျခံကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံတှေ အမြားအပွားရှိပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ဖကျဒ ရယျပွညျထောငျစုစနဈဆီ ဦးတညျမယျလို့ ကွှေးကွျောထားပါတယျ။ တဈခြိနျတုနျးက ဖကျဒရယျမူကို လကျခံလိုကျရငျ နိုငျငံ အစိတျစိတျ အမှာမှာ ပွိုကှဲတော့မယျလို့ တဈပါတီအာဏာရှငျအစိုးရက ဝါဒဖွနျ့ခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့သဘောဆန်ဒက ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတညျထောငျဖို့ပါပဲ။ ဖကျဒရယျပွညျ ထောငျစုတှကေို ကမ်ဘာမှာ လလေ့ာကွညျ့ရငျ အာဂငျြတီးနား၊ သွစတွေးလြ၊ သွစတွီးယား၊ ဘယျဂြီယမျ၊ ဘရာဇီးလျ၊ ကနဒေါ၊ ဂြာမနီ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ အိန်ဒိယ၊ မလေးရှား၊ မက်ကဆီကို၊ နီပေါ၊ နိုငျဂြီးရီးယား၊ ပါကစ်စတနျ၊ ရုရှား၊ UAE၊ ဆှဈဇာလနျ၊ အမရေိကနျ. . . . စသဖွငျ့တှရေ့ပါတယျ။ ဖကျဒရယျလို့ပဲချေါချေါ “ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရ စီရငျစုတှေ၊ ပွညျနယျတှကေို ဖကျဒ ရယျအစိုးရအောကျမှာ ထားရှိအုပျခြုပျခွငျး”ပါပဲ။ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရပွညျနယျတှကွေားမှာ အာဏာခှဲ ဝထေားပါတယျ။
ဖကျဒရယျစနဈကို ကငျြ့သုံးကွတဲ့နိုငျငံတှဟော တဈနိုငျငံနဲ့တဈနိုငျငံ မတူကွပါဘူး။ ကမ်ဘာပျေါက နိုငျငံအမြားစုက တော့ “တဈပွညျထောငျစနဈ နိုငျငံတျော” လို့ချေါတဲ့ Unitary Statesတှေ ဖွဈကွပါတယျ။ အဲ့ဒီနိုငျငံတှမှော ဗဟိုအစိုးရရဲ့ ခြုပျကိုငျမှုပိုမြားသလို ဗဟိုအစိုးရကပဲ ဥပဒပွေုရေးအာဏာရှိတဲ့သဘောပါ။ တဈပွညျထောငျစနဈကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံတှထေဲမှာ ယူနိုကျတကျကငျးဒမျး (ဗွိတိနျ)၊ ဂပြနျ၊ စပိနျ၊ ပွငျသဈ . . . စတဲ့ နိုငျငံတှပေါဝငျပါတယျ။
ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုတဈစုကို သူ့ရဲ့အဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့ စုပေါငျး ဖှဲ့စညျးထားပါတယျ။ ဒီနရောမှာလညျး တဈနိုငျငံနဲ့ တဈနိုငျငံမတူပါဘူး။ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုအဖှဲ့ဝငျတှထေဲမှာ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးခှငျ့ရတဲ့ (ဒါမှမဟုတျ) ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ ရတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှပေါဝငျပါတယျ။ လူမြိုးကို အခွခေံလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ပထဝီအနအေထားကို အခွခေံလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ စီးပှားရေးနောကျ ခံကို အခွခေံလို့ပဲဖွဈဖွဈ ပွညျထောငျစုအဖှဲ့ဝငျအဖွဈ သတျမှတျပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံဟာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးပေါငျးစုံမှီတငျးနထေိုငျတဲ့နိုငျငံဖွဈလို့ လူမြိုးကို အခွခေံတဲ့ ပွညျထောငျစုအဖှဲ့ဝငျ တှေ သတျမှတျရငျ သတျမှတျလို့ရတဲ့အနအေထားပါ။ ဒါပမေယျ့ မတူညီကှဲပွားတဲ့ ယဉျကြေးမှုရှိနတေဲ့ လူမြိုးတှရေဲ့ ဖွဈတညျ မှုကို အသိအမှတျပွုလကျခံရမှာဖွဈပါတယျ။ အမှနျတကယျ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုဆီဦးတညျခငျြရငျ လူမြိုးရေးပဋိပက်ခပုံစံ ပုံဖျောနမှေုတှကေိုပါ လြှော့ခရြမှာပါ။ လကျရှိအနအေထားမှာ တိုငျးရငျးသားတှနေထေိုငျတဲ့ပွညျနယျတှမှော (၂၀၁၅) ရှေးကောကျပှဲတုနျးက တိုငျးရငျးသားပါတီတှေ အနိုငျရရှိဖူးတဲ့ သာဓကရှိပါတယျ။ ရှမျးနဲ့ရခိုငျပွညျနယျမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ပွညျနယျအစိုးရဖှဲ့စညျးတဲ့အခါ တိုငျးရငျးသားပါတီကသူတှေ ဝနျကွီးခြုပျဖွဈခှငျ့မရဘဲ ဗဟိုအစိုးရကရှေးခယျြသူတှပေဲ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျတှေ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ဖကျဒရယျကိုသာကငျြ့သုံးရငျ တိုငျးရငျးသားပါတီတှအေမြားစု အနိုငျရရှိတဲ့ ပွညျနယျတှမှော လှတျလှတျလပျလပျအစိုးရဖှဲ့နိုငျမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ (၁၉၄၇)ခုနှဈ၊ ဧပွီလမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ တိုငျးပွုပွညျပွုလှတျတျောရှေးကောကျပှဲကနေ လူမြိုးစုလှတျ တျောအမတျတှေ ပျေါထှကျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ(၁၉၄၇) ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေရ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူမြိုးကို အခွခေံတဲ့ ပွညျထောငျစုအဖှဲ့ဝငျတှကေို သတျမှတျခဲ့ဖူးပါတယျ။ဂြာမနီဥပမာ
ဂြာမနီနိုငျငံဟာ ပွညျနယျ (၁၆)ပွညျနယျပါဝငျတဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုနိုငျငံတဈနိုငျငံပါ။ ပထဝီအနအေထားပျေါ မူတညျပွီး “ဘာလငျ”နဲ့ “ဟနျးဘာ့ချြ”ကို CITY STATE(မွို့ပွပွညျနယျ)လို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ ၁၉၄၉ ခုနှဈမှာ Federal Republic of Germany ကို ဒုတိယကမ်ဘာစဈပွီးနောကျပိုငျး တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအခြိနျတုနျးက အနောကျဘာလငျ ဟာ ဂြာမနီရဲ့ တရားဝငျအစိတျအပိုငျးမဟုတျသေးပါဘူး။ ၁၉၅၂ ခုနှဈမှာ လူထုဆန်ဒခံယူပှဲကငျြးပပွီး Baden အပါအဝငျ နယျမွေ (၃) ခုဟာ Baden- Wur Hemberg ပွညျနယျအဖွဈ ပျေါထှကျလာခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၅၇ ခုနှဈမှာ ဆားလိစိ အစောငျ့ အရှောကျခံဒသေဟာ ပွညျထောငျစုနဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဆားလိစိပွညျနယျအဖွဈ ပျေါထှကျလာခဲ့ပွနျပါတယျ။
၁၉၉၀ ခုနှဈမှာ အနောကျဂြာမနီနဲ့ အရှဂြေ့ာမနီဟာ ဂြာမနီနိုငျငံအဖွဈ တရားဝငျပေါငျးစညျးခဲ့ပါတယျ။ ဂြာမနီ ဒီမိုကရကျတဈပွညျထောငျစုလို့ချေါဝျေါတဲ့ အရှဂြေ့ာမနီဟာ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုရဲ့အစိတျအပိုငျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ပေါငျးစညျးခဲ့တဲ့ ပွညျနယျတှကေ Branden burg, Saxany, Saxany-Anhalt နဲ့ Thuringia တို့ဖွဈပါတယျ။ အနောကျဘာလငျနဲ့ အရှဘေ့ာလငျဟာလညျး “ဘာလငျ”အဖွဈ စုစညျးပွီး တနျးတူညီမြှအခှငျ့အရေးရတဲ့ ပွညျနယျတဈခုဖွဈ လာခဲ့ပါတယျ။
နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးမှာ ပွညျထောငျစုအစိုးရက အဓိကလုပျကိုငျဆောငျရှကျပမေယျ့ ပွညျထောငျစုအဖှဲ့ဝငျပွညျ နယျတှမှောလညျး လုပျပိုငျခှငျ့ ရှိသငျ့သလောကျ ရှိပါတယျ။ Bundesrat လို့ချေါတဲ့ အထကျလှတျတျောမှာ လှတျတျောကိုယျ စားလှယျတှကေို သကျဆိုငျရာပွညျနယျအစိုးရတှကေ ရှေးခယျြခနျ့အပျကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပွညျနယျတှမှောရှိတဲ့ လူဦးရေ အပျေါမူတညျပွီး အထကျလှတျတျောမှာ ပါဝငျခှငျ့ရရှိတာပါ။
Basic Law လို့ လူသိမြားတဲ့ (၁၉၄၉)ခုအိမျမှာ ပွဌါနျးခဲ့တဲ့ ဥပဒဟော နိုငျငံအုပျခြုပျရေးရဲ့အသကျဖွဈပါ တယျ။ ဒီ Basic Law ကိုပွငျဆငျဖို့အတှကျ ပါလီမနျအဖှဲ့ဝငျ သုံးပုံနှဈပုံရဲ့ ထောကျခံမှု လိုအပျပါတယျ။ လူ့အခှငျ့အရေး၊ လူ့ဂုဏျ သိက်ခာကို အာမခံပွီး ဖကျဒရယျကို အခွခေံတဲ့ ပွညျနယျအစိုးရတှဟော တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးကိုပဲ အဓိကဦးစားပေးအဖွဈ သတျမှတျထားပါတယျ။ ပထဝီအနအေထားအရ အခွခေံတဲ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစုပဲဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျအထိ စကျမှုအငျ အားကွီးနိုငျငံအဖွဈ ရပျတညျနဆေဲပါ။ ထူးခွားခကျြက အခွခေံ ဥပဒမှော အထကျလှတျတျောကို ဖကျြသိမျးခှငျ့မရှိပါဘူး။
သွစတွီးယားဟာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေးဇာတျခုံမှာ ထငျရှာသလို ဖကျဒရယျစနဈကို လကျကငျြ့သုံးတဲ့နိုငျငံတဈနိုငျငံ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျနယျ (၉) ခုနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့နိုငျငံဖွဈပွီး ဂြာမနျဘာသာနဲ့ Lander လို့ချေါပါတယျ။ ( ပညျနယျတှကေိုချေါတဲ့ အချေါအဝျေါပါ) ။ ဖကျဒယျပွညျနယျတှကေိုတော့ ဂြာမနျဘာသာနဲ့ Bundeslander လို့ချေါပါတယျ။
ပွညျနယျ (၉) ခုက Bundeslander, Carinthing, Lawer Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Upper Austria, Vienna တို့ဖွဈပါတယျ။ ပွညျနယျတဈခုစီတိုငျးဟာ Landtag လို့ချေါတဲ့ ဥပဒပွေုလှတျတျောတှေ အတှကျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျတှကေို ရှေးခယျြတငျမွှောကျရပါတယျ။ ပွညျနယျတှမှော ရှေးကောကျပှဲတှကေို ငါးနှဈတဈကွိမျ ကငျြးပပါတယျ။
အားနညျးခကျြကတော့ ပွညျထောငျစုအစိုးရမှာ ဥပဒပွေုခှငျ့အာဏာပိုရှိတဲ့ အခကျြပါပဲ။ ဥပဒပွေုလှတျတျောမှာ ပါတီ ရှဈခုက ကိုယျစားလှယျတှပေါဝငျပွီး အထကျလှတျတျောကို ဖကျဒရယျကောငျဒီလို့ချေါပွီး အောကျလှတျတျောကို အမျြိါုသားကောငျစီလို့ချေါပါတယျ။ ပါလီမနျဟာ မွို့တျောဗီယငျနာမှာ တညျရှိပွီး (၁၉၂၀) က အတညျပွုခဲ့တဲ့ ဖကျဒရယျအခွခေံဥပဒကေို ကငျြ့သုံးတာပါ။ အစိုးရအကွီးအကဲဟာ ဖကျဒရယျသမ်မတဖွဈပွီး Popular Vote နဲ့ ရှေးခယျြပါတယျ။
ဖကျဒရယျဟာ ကိုယျပိုငျပွဌါနျးခှငျ့နဲ့ တနျးတူအခှငျ့အရေးကို အာမခံတဲ့စနဈသာဖွဈပွီး ဘယျလိုဖကျဒရယျက ပိုအကြိုးမြားမလဲဆိုတာ ကိုယျ့နိုငျငံနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ဖကျဒရယျစနဈကိုပဲ ရှေးခယျြရမှာဖွဈပါကွောငျး။ ။သှေး (စဈကိုငျး)